Ngeso lenyama Grade Mica Powder, izithambiso Grade Mica Powder, Pearlescent Mica Powder - Huajing
Ingakumbi ukubandakanyeka ekusebenzeni kakuhle kwe-non-metallic ores, kubandakanya i-mica yendalo, i-mica yokwenziwa, iiminerali ezisebenzayo, njl.
Ibanga lezithambiso-iMuscovite yeMicah Powder yendalo
Ukwahlula iBakala-iPhlogopite Mica Powder
IBakala loKwakha iBakala-Umbala weMicah Powder
IBakala lePlastiki-uMdumba weMicah Powder
IBakala lePlastiki-iPhlogopite Mica Powder
Malunga nenkcazo yefektri
I-Lingshou Huajing Mica Co, Ltd., eyasekwa ngo-1994, inembali yeminyaka engama-27 ukuza kuthi ga ngoku. Lishishini elijolise kwimveliso ikakhulu kulungiso olucokisekileyo lwesinyithi esinganyibilikisiyo kubandakanya imicah yendalo, imicu yokwenziwa, ukusebenza kwezimbiwa njlnj. I-Huajing ibonelela ngezisombululo zehlabathi ngokusekwe kubuchwephesha obusebenzayo, usetyenziso oluphezulu, phakathi kwemveliso ye-mica egubungela uthotho iklasi yonke uthotho. Inkampani ibeke iziko lophando kunye nophuhliso kumacandelo ahlukeneyo, ekubonelela ngenkxaso yezobuchwephesha kwimveliso yomzi mveliso kunye nakwizixhobo zokuthambisa.
Iincwadana zethu, ulwazi lwamva nje malunga neemveliso zethu, iindaba kunye nezibonelelo ezizodwa.
Cofa ukuze ubuze
IHuajing ineqela lobuchwephesha elimalunga ne-100 lamalungu azinikele kwimveliso kunye nokuveliswa kweemveliso ezikumgangatho ophezulu ezivela kwimicah nakwezinye iimveliso zezimbiwa.
Inkampani ibambelela kwisicwangciso-qhinga somgangatho ophezulu kunye nophuhliso oluzinzileyo kwaye ithatha izinto ezintsha zesayensi kunye nezobuchwephesha njengokhuphiswano lwazo oluphambili.
Inkampani ineendawo ezimbini ze-R & D kumacandelo ahlukeneyo ukubonelela ngenkxaso yobuchwephesha kwimveliso yezemveliso kunye nezinto zokuthambisa ezisisiseko.
Kwimveliso ye-mica yokwenziwa, ukusetyenziswa kwezimbiwa okusebenzayo kunesikhokelo sobuchwephesha esikhokelayo.
Izinto zokwakha kunye neMbasa
Ulwazi olutsha malunga neendaba zethu
I-Huajing ibambelela kwinkqubo yolawulo oluphambili
Ulawulo lwalo mveliso iye ngokungqinelana ISO9001: 2015 inkqubo yolawulo lomgangatho, ISO14001: 2015 ...
152021 / Jan.
Inyaniso malunga ne-enviro ...
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, ezinye izinto ezintle zenzekile kwicandelo lobuhle obuluhlaza. Ayisiyiyo kuphela ukufikelela kukhetho oluninzi olucocekileyo nolungena tyhefu, ukhathalelo lweenwele kunye nezinto zokuthambisa, kodwa sibona iimveliso zitshintsha ukugxila kwazo ekwenzeni iimveliso ezizinzileyo kunye nokupakisha ...
2020-2026 Global Mica ...
Ingxelo yophando yakutshanje ekhutshwe ngabakwaMarketsandResearch.biz iqikelela ukuba imakethi ye-mica yehlabathi yenziwa ngumenzi, ingingqi, uhlobo kunye nokusetyenziswa ngo-2020. Luphando lwakutshanje oluya ku-2026 kwaye lubonelela ngalo lonke ulwazi olukhoyo lwentengiso kunye namathuba kwintengiso yehlabathi. Isikhokelo ...
Uphuhliso kunye nokusetyenziswa ...
I-Mica ligama eliqhelekileyo leeminerali ezilayishwe ngetayitile, ezineempawu zokugquma, ukungafihli, ukumelana nobushushu, ukumelana nokubola, ukwahlula ngokulula kunye nokuhlutha kunye nokugcwala. Isetyenziswa ngokubanzi kwizithambiso, iiplastiki, irabha, ukutyabeka, umhlwa ...